ချစ်ရအောင်: ဆိုက်ကို ဘယ်လို link ပြန်ညွှန်းခိုင်းမလဲ
ညီလေး နေဇင်လတ်က မေးလာတာပါ .. အရင်ကလဲ ဘယ်သူလဲ မသိဘူး မေးပါသေးတယ် ရေးမယ်ရေးမယ် နဲ့ အလှည့်မရောက် တာပါ . အောက်က code တွေကို copy ကူးပြီး Page Elements >> AddaGadget ကိုသွားပြီးတာနဲ့ html ကို ရွေးပြီး ကူးထည့်လိုက်ပါ . လိုအပ်တာ တွေကိုပဲ လိုက်ပြောင်းပါ . textarea ကို 25 ပေးထားပါတယ် .. အဆင်ပြေသလို ပေးလိုက်ပါ . ကို့ဆိုက်နဲ့  ကိုက်သလိုပေါ့ ..
ကဲ အပေါ်မှာ မှင်အနီနဲ့ရေးထားတာက ကို့ရဲ့ ဆိုက်လိပ်စာဖြည့်ရမှာပါ . မှင် ပန်းရောင်နဲ့ရေးထားတာကတော့ ကိုထည့်ပေးမယ့် ကို့ဆိုက်အတွက် ဒီဇိုင်းပုံ လှလှလေးပေါ့ . photoshop ပိုင်ရင်ပိုင်သလို လုပ်လို့ရပါတယ် . နောက်ပိုင်းကျွန်တော် photoshop အတွက် ပုံစံလှလှလေးတွေ လုပ်ပုံလုပ်နည်း ထပ်တင်ပေးပါဦးမယ် . ပေးချင်တာတွေကတော့ အများကြီးပဲ . ဗိုင်းရပ်စ်ရေးသားပုံ ရေးသားနည်းအချို့ရယ် ၊ ဟိုတစ်နေ့က ပြောခဲ့တဲ့ အထူးအစီအစဉ်ရယ် . တင်ပေးစရာ program တွေရယ် . အများကြီးပဲ အခုတော့ တောင်းဆိုတာတွေကို ဦးစားပေးပြီး တင်ပေးသွားပါ့မယ် ..